Waxaan sii wadnaa inta uu socday COVID-19
Iyada oo la raacayo xakamaynta wax-ku-oolka ah ee dhawaanta ah ee 'Covid-19' ee Shiinaha, warshado badan ayaa dib u furey oo dib u bilaabay soo-saarka si tartiib tartiib ah. Qaar ka mid ah macaamiisheena ayaa isku dayaya inay sida ugu fiican u riixaan ganacsiga, xitaa waxay wali ku shaqeeyaan guriga. Waa kalidiilo wax ku ool ah qof walba, dhammaanteen waxaan rumeysan nahay in waxyaabaha ugu dambeyntii sifiicnaan doonaan.
Xaqiijinta in wax soosaarku u socdo sidii qorshuhu ahaa isla markaana daryeelka caafimaadka shaqaalaha isla waqtigaas, waxaan u qaadannaa habab fara badan sida xirashada maaskarada, iyo inaan ilaalino masaafada 8 cagood midba midka kale, iska dhaqista gacmaha intii suurtagal ah. Intaa waxaa sii dheer, inta lagu gudajiray waqtigaas, macaamiil badan ayaa qaban kari waayey kormeerka sidii ay ahaan jireen, waxaan xallinaynaa dhibaatada waxaan u dirnaa maqal iyo muuqaal sawir macaamiisha, kuwaas oo leh dalabka. Oo waxaan soo diri lahaa dhammaan faahfaahinta alaabada, baakadaha, qaybaha meelaha bannaan iyo xitaa qaar ka mid ah habraaca soosaarka, ka dib ayaan helnaa oggolaanshaha ka hor inta aannaan abaabulin raridda. Ku qanacsanaanta macaamilka ayaa u qalma shaqadeena ugu wanaagsan.
Maamulaha guud, fiiro dheeri ah iyo mushahar siiyo shaqaalahayaga, si aad u soo iibsatid alaabo badan oo ilaalin ah, sida maaskaro wajiga, saabuunta dareeraha ah iyo miraha si aad shaqada oo dhan u sii waddo. Xitaa hada waa waqti adag, dhamaanteen waxaan dareemeynaa geesinimo inta lagu jiro waqtigan, sababtoo ah waxaan dhamaanteen u wada mideyneynaa inaan la kulanno dhibaatada. Rumayso dadaalkeena oo dhan, berrito waxay noqon doontaa mustaqbal ifaya.
Annagoo ilaalinayna tayada wax soo saarka, waxaan qaadanay shuruud adag oo ka adag sidii caadiga ahayd. Maaddaama aysan jirin hab lagu habeeyo kormeerka goobta sida tii hore, waxaan macaamiisha ku casuuminnay shir fiidiyow si ay u fiiriyaan faahfaahin kasta oo soo-saarka, waxaanan u dirnay warbixinta kormeerka intaas kadib. Macaamiisheenna qiimaha badan, waxaan la kulannaa waqti aad u adag. Iyada oo habeenku dhammaan doono oo maalinta ayaa iman doonta. Xor baad u tahay inaad soo booqato bartayada internetka, ama email noo soo dir amar.